မိန်းကလေးတွေကြွေတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ပုံစံက ဘယ်လိုမျိုးလဲ ? – Trend.com.mm
မိန်းကလေးတွေကြွေတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ပုံစံက ဘယ်လိုမျိုးလဲ ?
Published by popo - November 8, 2017 - Leave your thoughts
မိန်းကလေးတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အကြိုက်ချင်းသာမတူကြတာ အများအားဖြင့် ဘယ်လိုယောက်ျားလေးမျိုးက အထာကျတယ်၊ ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဘယ်သူကစိတ်ထဲ တန်းရောက်သွားစေတယ် စတဲ့ ယောကျာ်းလေးပုံစံမျိုးလေးတွေကတော့ တူညီနေတတ်ပါတယ်။မိန်းကလေးတွေ သဘောကျတတ်တဲ့ ယောင်္ကျားလေးပုံစံတွေကတော့…
၁။ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရမ်း ပြင်ဆင်မထားဘဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေတတ်သူ
မိန်းကလေးတွေထက် ပိုပြီးအလှအပကြိုက်တဲ့ယောက်ျားလေးမျိုးဆိုရင်တော့ မိန်းကလေးတွေက ဝေးဝေးကရှောင်မှာသေချာပါတယ်။ယောကျာ်းလေးတွေက နည်းနည်း သပ်သပ်ရပ်ရပ်နေလိုက်တာ နဲ့ သူတို့ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုက ပေါ်လွင်လာပါတယ်။
စကားပြောတဲ့အခါမှာ လေသံတိုးတိုးလေးနဲ့ပြောတာထက်စာရင် မိန်းကလေးတွေက အသံကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ခပ်မှန်မှန်ပြောတတ်တဲ့ ယောင်္ကျားမျိုးကို ကောင်မလေးတွေကပိုပြီး သဘောကျကြပါတယ်။စကားပြောရင်အော်ပြောတတ်တဲ့ယောကျာ်းလေးတွေကို မိန်းကလေးတွေက သဘောမကျပါဘူး။
တိရစ္ဆာန်လေးတွေချစ်တတ်တဲ့ယောကျာ်းလေးတွေက ပိုပြီးစိတ်သဘောထားနူးညံ့တတ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ချစ်သူမိန်းကလေးတွေအပေါ်မှာလည်း ကြင်နာလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြလို့ မိန်းကလေးတွေက တိရစ္ဆာန်ချစ်တတ်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုသဘောကျတတ်ပါတယ်။
နှုတ်ချိုရင် ဘယ်သူနဲ့မဆိုအဆင်ပြေပြေဆက်ဆံလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အဆင်ပြေတဲ့သူ၊သဘောကောင်းတဲ့သူကို ကောင်လေးမျိုးဆိုရင်လည်း ကောင်မလေးတွေက သဘောကျတတ်ကြပါတယ်။
ဘေးနားကပ်ပြီး စကားပြောကြည့်လိုက်လို့ ကိုယ်နံ့သင်းသင်းလေး ရနေတတ်တဲ့ ဘဲမျိုးကို ကောင်မလေးတွေက သိပ်ကိုကြွေတာပါ။ ရေမွှေးတွေ အသားကုန်ဆွတ်ထားတာမျိုးလည်း မဟုတ်၊ ဒါမှမဟုတ် ချွေးနံ့တွေ တထောင်းထောင်းထွက်နေတာမျိုးလည်း မဟုတ်တဲ့ ကောင်လေးမျိုးပေါ့။ ကိုယ်သင်းရနံ့ကလည်း မိန်းကလေးတွေကိုအရမ်းဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်မှမဟုတ် တစ်ခြားသူတွေကို ကူညီတတ်တဲ့ ယောက်ျားမျိုးဆိုရင်လည်း ကောင်မလေးတွေက စိတ်ထဲကနေ ကြိတ်ပြီးမမ်းသာဂုဏ်ယူနေတတ်ကြပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပြီး ရှေ့ကနေဦးဆောင်လုပ်သွားနိုင်တဲ့ယောက်ျားလေးမျိုးဆိုရင် မိန်းကလေးတွေက အားကိုးချင်ကြပါတယ်။ကိုယ်တိုင်လည်း ဦးဆောင်နိုင်ပေမဲ့ ရှေ့ကနေမားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးနိုင်တဲ့ယောက်ျားလေးကိုပိုပြီး သဘောကျတတ်ကြပါတယ်။
Author popoPosted on November 8, 2017 Categories Lifestyle, News
Previous Previous post: ဂျပန်နိုင်ငံမှာဖျော်ဖြေပွဲလုပ်နေတဲ့ CNBLUE အဖွဲ့ကို သွားရောက်အားပေးခဲ့တဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင် Chanyeol